Ukucheba iinwele kumadoda: iifoto kunye nemibono yabo bonke ubuso | Amadoda aQinisekileyo
Ukucheba iinwele kuye kwaba phakathi kwezona zidumileyo kumashumi eminyaka. Kuba iklasikhi eyinyani yeenwele zamadoda, Ukubheja okukhuselekileyo xa kufikwa ekufumaneni iinwele.
Kwaye ezinye izibonelelo: Xa kuthelekiswa nezinye iinwele, i-gradient isebenza kakuhle nazo zonke iimilo zobuso. Ukongeza, ihlala ihlelwa ngaphakathi kweenwele eziphantsi zokugcina. Oko kuthetha ukuba ukuhlamba, ukomisa kunye nesimbo kufuna ixesha kunye nomzamo omncinci. Kufanelekile ukuba uyiqwalasele ukuba ungomnye wabo bafuna ukubekeka ngokukhawuleza ngentseni.
1 Uyifumana njani igradient yeklasikhi
2 Ungayitshintsha njani imo ebusweni bakho
2.1 Ubuso obukhulu
2.2 Ubuso obujikelezileyo
2.3 Ubuso obude
3 Ukucheba iinwele kumadoda aneenwele ezintle
Uyifumana njani igradient yeklasikhi
Kwiigradients, i-nape kunye namacala ashiywe mfutshane. Eminye ngokuthe ngcembe iba nde njengoko sisondela kumphezulu wentloko. Ubume bayo bufikelela kukhetho lomntu ngamnye. Imfihlo yokwenza ukuba isebenze ngokugqibeleleyo kukuthathela ingqalelo ukumila kobuso xa usenza zonke iiyantlukwano ezinokwenziwa. Ke, unokukhetha kwizinto ezininzi eziphezulu: ukwahlula icala, iinwele zangasemva, ii-bangs, kunye ne-toupee, spiky, ukungcola okufundwayo, mfutshane kakhulu, njl.
Ukuba ufuna igradient yesikolo esidala, Kubaluleke kakhulu ukuba isiphumo sibe sendalo ngangokunokwenzeka. Oku kuthetha ukuba akukho mfuneko yokuba kubekho umahluko oqinileyo phakathi kweendawo ezahlukileyo zokusika. Omnye umgaqo wesithupha awuyikuqala i-gradient ephezulu kakhulu ngasemva kwentloko. Iingcali zikhomba kwithambo le-occipital (ipleyiti eyenza indawo esezantsi naphakathi kwikhakhayi elingasemva) njengesiqalo ukuze iinwele ezifipheleyo zingabi yindlela yangaphantsi. Emva koko, ngokungafaniyo ne-undercut, ubude buyanda ngendlela egudileyo kunye nokulingana njengoko sinyusa ukhakhayi.
Ifilimu kunye nomabonwakude zibonisa eyona mithombo ilungileyo yokuphefumlela iinwele, kwaye xa kufikwa kumanqaku, akukho ngaphandle. Kulula kakhulu ukufumana izingqinisiso, ezinye zazo zimnandi, njengoko kunjalo noluhlu lwegqwetha, 'iisuti'. Abalinganiswa abaphambili 'beSuti' (UGabriel Macht kunye noPatrick J. Adams) iinwele ezithandekayo ezinwele umdlalo wabo.
Ungayitshintsha njani imo ebusweni bakho
Ukuba unobuso obu-oval, oko kuthetha ukuba ilungelelaniswe ngokugqibeleleyo. Ke ungafikelela kulo naluphi na uhlobo lokucheba kwegradient, nkqu nesimbo somkhosi esiphawula amanqaku akho.
Kule meko, iyanqunyulwa okanye ifutshane kakhulu phezulu, kusetyenziswa isikere ukuba kunesiphumo esibi kakhulu. Oku kuvumela i-clipper ukuba igqithe kuqala uye kuthi, emva koko, macala nasentanyeni, iye kwenye, ingayeki ukuba yendalo. Unako ukugqiba i-gradient ukuya kwi-zero ngeziphumo ezintle. Abantu abadumileyo njengoJamie Foxx okanye uWill Smith yimizekelo ethile. Nokuba uya kwisitayile somkhosi okanye ukhetha into ende, cinga ukucoca ibunzi lakho. Oko kuyakugxininisa ukwakheka kwethambo lakho, okusoloko kungumbono olungileyo.
Isitshixo sokunciphisa ukujikeleza kobuso kunye nokucheba kwe-gradient kukufumana ubume obukhali, kodwa ngaphandle kokuphulukana nokulingana. Ukuba olu luhlobo lwakho lobuso Cinga ngokugcina amacala amafutshane kakhulu kwaye unika umphezulu ukuphakama okuninzi. Buza i-barber yakho ukuba ingazisiki xa i-clipper imfutshane kakhulu emacaleni. Kwakhona, ukuqala ukuthweswa isidanga phezulu phezulu kwindawo kunye nasemacaleni kuyanceda ukunciphisa ubuso.
Ukuba unobuso obude, thintela iinwele ezingasasebenziyo ezimfutshane kakhulu emacaleni. Ngokufanelekileyo, sebenzisa isikere. Isiphumo esihle sinokufezekiswa ngokunqunyulwa kweenwele ngokulungisa indawo esezantsi yeetempile njengomgca obomvu. Ukusika ezinye iinwele kumaleko ngesikere, ngelixa ugcina umphezulu ngobude, kwaye ukunqanda ukucoca ngokupheleleyo ibunzi zezinye iinkcukacha ezithathwa njengezincomayo kolu hlobo lobuso.
Ukucheba iinwele kumadoda aneenwele ezintle
Ukucheba iinwele kusebenza okuhle kumadoda aneenwele ezintle. Isitshixo kukususa phezulu. Ukwenza oku, kuyachetywa (iitshixo ezinde zonyusa ubunzima beenwele) ngelixa zinika ukuthungwa. Ukuyimbolela, jonga ukungcola okufundisiweyo okuthambisa ubume bobuso, njengalowo ukwimifanekiso engasentla. Xa useta isitayile sakho, thintela iimveliso ezinzima ezinceda ukuba iinwele zakho zibonakale zincinci kwaye zihlwempuzekile. Endaweni yokujonga ii-wax ezenziwe ngomgubo, ezinika umzimba kwaye zigqibe matte.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Isitayile esinenwele » Ukucheba iinwele kumadoda
Imithambo yokulahlekelwa sisisu